QISO:QALBI WAX JECEL MISNA DHAAWACAY QALBI KALE.. | Wararka Dalka Iyo Dibada
QISO:QALBI WAX JECEL MISNA DHAAWACAY QALBI KALE..
Waayahan danbe waxaan dareemayaa culeys badan oo dhanka qalbiga ah, anigoo ku jecel ayaa hadana ku dareensiin kareyn jaceylka xadka dhaafay ee aan halkaan lagu soo bandhigi karin.
Waxaan aad u dareensanahay in adiga qalbigaada uu u ololayo sida dhimbisha naareed, anigoon xaqirsaneyn misna la socda ayaan hadana waxba ka qaban kareyn, igamana aha xaalad aan aniga lafteyda jecleystay inan adiga kugu fiirsado.
Waxaan ahaa ruuxi adiga shalay kula jeclaa nolosha midabada ay leedahay inuu ku tuso, wax walba aad jeceshahayna adiga farxadaada u sameyn jiray.
Hadii aad maanta adigu jiri laheyn jaceylkan aadka u mugweyn muusan jireyn, waxaan marnaba aanan xaqiri karin inaad adigu tahay ruux jaceyl lala wadaago ruuxa u wacan nolol qofkii kugu helana iskaba daa warkiisa. Xaqiiqdi waxaa tahay shaqsi ka duwan dadka kale dabci ahaan, dhaqan ahaan, iyo furfuraanba hadana intaas aniga ma arko oo qalbiga ayaa ka indho la ahay.
Adigoo wax walba maanta ii ogol diyaarna ila ah inaan si’ aadan fileyn kula dhaqmo ama aan taageeri waayo balamihii iyo wacadkii dhexdeena ahaa, waa wax laga qurux badnaa. Waxaan aad kaga dalbanahay cafis inkastoo ay kugu adagtahay hadana qalbigaada ayaan diidi karin ileyn jaceylbaa dhex yaale.
Anigoo hada waqtigan la joogo ku jecel ayaa hadana ku qasbanahay inan wax talaabo agtaada usoo qaadin sababtaana ah in adiga ilintaada ay i dhibeyso ama marnaba aanan ogoleyn in aan kusoo xasuusiyo marxalidihi xumaa ee aad lasoo nooleyn waayahan danbe anigana ha ii ahaato XANUUN AAN BOGSANEYN SI AAN U DAREEMO DHIBAATADA AAN GEYSTAY.